“လူ့လောကရဲ့ လူပီသတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်” - Online Hartha
တနေ့က အလုပ်ခွင်ထဲ ဂျပန်လူမျိုးအလုပ်ရှင်က ကိုယ့်ဘေးမှာ ပိုက်ဆံတွေ အထပ်လိုက်ရေနေတယ်။ (စာမမှနျပါက အောကျတှငျဆကျဖတျပါ)
မြန်မာငွေနဲ့ဆို သိန်း(၃၀၀)နီးပါးတော့ ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ အနားမှာ လာရေတွက်နေတာဆိုတော့ ကိုယ်လည်း ဘာရယ်မဟုတ် ဖျတ်ခနဲ ကြည့်မိလိုက်တယ်။
မျက်စိလျင်တဲ့ သူဌေးက ပိုက်ဆံတွေရေနေရင်းနဲ့ ပြုံးပြီး လှမ်းမေးတယ် ” ယူမလား ” တဲ့။
ကိုယ်လည်း ပြုံးပြီး ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ” မယူပါဘူး ” လို့..။ ( နို့ ယူမယ်ပြောလည်း ရမှာမှ မဟုတ်တာချည်းကိုး )
ပြောချင်တာက အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ပိုက်ဆံတွေမြင်တော့ ” ငါလည်း ထီလေးဘာလေး ထိုးဦးမှပါ” လို့ သူဌေးလုပ်သူကို ခပ်မျှဉ်းမျှဉ်းလေး ပြောလိုက်တယ်။ ထီပေါက်ရင် ဘာလုပ်မှာလဲတဲ့။
ထီပေါက်ရင် ကိုယ်အရင်ဆုံး လုပ်ဖြစ်မှာတွေ ရှိပေမယ့်၊ မပြောတော့ဘဲ တကယ်လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိပေမယ့် ဒီတသက်မှာ သိပ်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ ချဉ်ခြင်းတစ်ခုကို သူ့ကို ပြောမိလိုက်တယ်။ ” တတ်နိုင်ရင်ပေါ့ဟာ ဆင်ပေါက်စလေးတစ်ကောင်လောက် မွေးချင်တယ်” လို့၊ ” ဆင်ပေါက်စလေးက တအားချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်” လို့။ ဒီမှာတင်ပဲ သူက ကိုယ့်ကို ဘေးတိုက်အနေအထားကနေ တချက်ငဲ့စောင်းကြည့်ရင်း ခပ်တည်တည် ဆိုတယ်။ ” နင်အခု အရွယ်ရောက်မှ မွေးလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ “တဲ့။ ” ဟယ် ဘာလို့လဲ၊ ဆင်ပေါက်က ဈေးကြီးလွန်းလို့လား၊ ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာလည်း ငါသိပါတယ်၊ ဆင်ကြီးလာရင် ထားရပြုရဖို့အတွက် နေရာကောင်းကောင်း လိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်း ငါသိပါတယ်၊ အကယ်၍ အဲ့ဒါတွေ အားလုံးငါ့မှာ ရှိရင်လို့ ပြောတာပါ” လို့ မေးလည်းမေး အထွန့်လည်း တက်လိုက်တယ်။ သူက ခေါင်းခါရင်း ” မဟုတ်ဘူး။ အဲ့လောက်နဲ့ နင်မွေးလို့ မရဘူး” တဲ့။ တော်တော်ရစ်တဲ့ ဂျပန်ပဲ..
” ပြည့်စုံနေပြီပဲရော၊ ဘာလို့ မွေးလို့ မရ ရမှာလဲ ” လို့ အတိုက်အခံ ဆန်ဆန်လေး ပြောလိုက်မိတယ်ဆိုရင်ပဲ၊ သူက ပိုက်ဆံလည်း ရေပြီးသွားပြီမို့ ကိုယ့်ကို နည်းနည်းပါးပါးစကားပြောဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံရတယ်။”
” ဒီလိုရှိတယ်ဟ၊ ဆင်ရဲ့သက်တမ်းက လူ့သက်တမ်းနီးပါးရှိတယ်လေ။ နင်က အခု အသက်(၄၀)ပဲထားပါတော့၊ အခုမှ ဆင်ပေါက်လေးမွေးမယ်ဆိုရင် နင်သေသွားရင် သူက အရွယ်ကောင်းပဲ ရှိဦးမှာလေ၊ နင်မရှိတော့ရင် သူ့ကို ဘယ်သူက ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်မတုန်း ” တဲ့။
ကြည့်စမ်း! ဘယ်လောက်တောင် တုံးအပြီးရယ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ မေးခွန်းလဲလို့။ ကျမလည်း တကိုယ်တည်း အဲ့လိုတွေးပြီး ပွဲကျကျ ရယ်ပစ်လိုက်တယ်။ အားရပါးရ ရယ်ပြီးမှ အခုလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရယ်ပြောပြောမိလိုက်တယ်။ ” သူဌေးနှယ် ” အ ” ရန်ကော… အရွယ်ကောင်း ဆင်တကောင်ကို လိုချင်သူတွေများ ပေါလွန်းလို့၊ ရောင်းစားမလား၊ ပြစားမလား၊ ငှားမစား၊ ခိုင်းစားမလား ဒီလောက်အသုံးဝင်တဲ့ တရိစ္ဆာန်အတွက် နေစရာ စားစရာ ဒီလောက်တော့ လူတိုင်းစဉ်းစားတတ်ပါတယ် သူဌေးရယ်၊ ငါသေသွားလည်း သူ့အတွက် ပူစရာမလိုပါဘူး ” လို့ ခပ်အေးအေး လေသံနဲ့ ပြောလိုက်မိတယ်။
ဟုတ်တယ်မလားဟင်! ကျမ တွေးတာ စဉ်းစားတာ မလွဲဘူး မလား။ ဒါပေမယ့် ဒါပေမယ့်ပေါ့၊ ” နင်တော်တော် ရက်စက်တာပဲ ” ဗြုန်းခနဲ ကြားလိုက်ရတဲ့ စွပ်စွဲသံကြောင့် ကျမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ရုတ်တရက် ငြိမ်ကျသွားရတယ်။ ” ဟင်! ဘာလို့လဲ ” ” ဘာလို့လဲ ဟင်! ”
” ဘာလို့ရမလဲ…နင်စောစောက ပြောတဲ့ နင့်ဆင်ရောက်သွားနိုင်တဲ့ နေရာနဲ့အနေအထားတွေ စဉ်းစားကြည့်စိမ်း၊ ဘယ်တခုများ သူ့အတွက် သက်သာတဲ့ အနေအထားရှိလဲလို့၊ နင်က နင်သေသွားတာနဲ့ သူ့ကို ဘယ်ရောက်ရောက်၊ ဘယ်သူ့လက်ထဲ ဘယ်လို အခိုင်းခံရခံရ၊ သံကြိုးတွေနဲ့ ချည်နှောင်ပြီး တရိစ္ဆာန်ရုံလိုနေရာမျိုးမှာ တသက်လုံး အကျဉ်းချခံရခံရ၊ အစွယ်ပဲ အဖြတ်ခံရခံရ၊ ဘာဖြစ်ဖြစ် နင်နဲ့ မဆိုင်တော့ဘူးလို့ နင်ယူဆထားပုံရတယ်နော်” တဲ့။
” နင်တော်တော် ရက်စက်တာပဲ ” ဘုရားရေ ထပ်ပြောပြန်ပြီ ဒီစကားကြီး။
” တကယ်ဆို နင့်မှာ အသက်မရှိတော့ပေမယ့် ၊ နင့်မှာ တာဝန်ရှိသေးတယ်။ အို… ငါတောင် သေရသေးတာပဲ၊ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ လူ့တာဝန်မကျေတဲ့ စကားမျိုးတော့ ပြောလို့တော့ရတာပေါ့လေ။
ဒါပေမယ့် နင့်ကို ဘယ်သူက အတင်းရိုက် မွေးခိုင်းလို့လဲ၊ နင့်ဖာသာနင် အစကတည်းက သူ့ကို တာဝန်ယူပြီး မွေးထားတာလေ၊ နင်မွေးချင်လို့၊ နင်ချစ်လွန်းအားကြီးလို့၊ ချစ်စရာလေး ချစ်စရာလေး ဆိုပြီး မွေးတာ မဟုတ်ဘူးလား၊
” နင် အသက်ရှင်နေစဉ်တုန်းကတော့ သူနဲ့ပါတ်သက်ပြီး စိတ်ချမ်းမြေ့မှု၊ ကြည်နူးမှု၊ လူအထင်ကြီးမှု စတာတွေ နင်သူ့ဆီက ယူတယ်၊ သူက နင့်အတွက် ကျေနပ်စရာဖြစ်စေခဲ့တယ် မဟုတ်လား၊ သူ့အတွက်လည်း သူ့ကို ချစ်တဲ့ ( တကယ်တော့ နင့်စိတ်မျိုးနဲ့ဆို သူ့ကို ချစ်ချင်ယောင်ဆောင်တာပေါ့) သခင်လည်း မရှိတော့ရော ဒုက္ခတွေ ရောက်ရတော့မှာ သိသိကြီးနဲ့၊ နင်မသေခင်ကတည်းက နင်တခုခု မစီစဉ်ပေးခဲ့ဘူးဆို နင်တော်တော် မတရားတာပဲ၊ နင့်လောက် ရက်စက်တဲ့သူရှိပါဦးမလား။ နင့်လောက် တာဝန်မဲ့တဲ့သူ ရှိပါဦးမလား ” တဲ့။
သူပြောလိုက်တော့မှ ကျမ တုန်လှုပ်သွားမိတယ်။ တဆက်တည်းမှာ တချို့ကို သတိရသွားတယ်၊ လူတချို့ဟာ ကိုယ့်အိမ်မှာ မွေးမြူထားတဲ့ တရိစ္ဆာန်တကောင်အပေါ်ကိုတောင်မှ လူစိတ်မွေးပြီး အစအဆုံး တာဝန်ယူ စဉ်းစားပေးတတ်ကြပေမယ့်၊ လူတချို့ကတော့ ကိုယ့်သွေးကိုယ့်သားကိုယ့်သားသမီးအပေါ်မှာတောင်၊ အဲ့သည့်လို တာဝန်ယူစဉ်းစားမပေးကြဘူး။ ငါသေရင် နောက်လူတွေဘာဖြစ်ကျန်ခဲ့ကျန်ခဲ့။ တာဝန်မရှိတဲ့အတိုင်းပဲ။
လူတချို့က တိရိစ္ဆာန်တကောင်ဆီက မပြောပလောက်တဲ့ ကြည်နူးမှု၊ သာယာမှု၊ အဖေါ်ပြုမှုလေးကို ရတာနဲ့တင် တိရိစ္ဆာန်ကို ကျေးဇူးတင်တင် ချစ်ခင်တွယ်တာ တတ်ကြပေမယ့်၊ လူတချို့ကတော့ လိုတဲ့အခါသုံး၊ မလိုတဲ့အခါ လူအချင်းချင်း ချစ်ခင်တွယ်တာခြင်း ကျေးဇူးကင်းစွာ ဟင်းရွက်ကန်စွန်းပမာ စွန့်ပစ်တတ်ကြတယ်။ လက်လွတ်စပယ် လုပ်တတ်ကြတယ်။
” နင်ဟာ အလုပ်မှာ တာဝန်ကျေတဲ့ ဝန်ထမ်းကောင်းဆိုတာ ငါသိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အလုပ်ခွင်မှာ တာဝန်ကျေရင် ဝန်ထမ်းကောင်းပဲဖြစ်မယ်၊ လူပီသတဲ့ လူဖြစ်ဖို့ကတော့ လူ့လောကရဲ့ ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ လူ့ကျင့်ဝတ် လူ့ဝတ္တရားတွေကို တာဝန်ကျေဖို့လိုတယ်” တဲ့။
တနကေ့ အလုပျခှငျထဲ ဂပြနျလူမြိုးအလုပျရှငျက ကိုယျ့ဘေးမှာ ပိုကျဆံတှေ အထပျလိုကျရနေတေယျ။
မွနျမာငှနေဲ့ဆို သိနျး(၃၀၀)နီးပါးတော့ ရှိလိမျ့မယျထငျတယျ။ အနားမှာ လာရတှေကျနတောဆိုတော့ ကိုယျလညျး ဘာရယျမဟုတျ ဖတျြခနဲ ကွညျ့မိလိုကျတယျ။
မကျြစိလငျြတဲ့ သူဌေးက ပိုကျဆံတှရေနေရေငျးနဲ့ ပွုံးပွီး လှမျးမေးတယျ ” ယူမလား ” တဲ့။
ကိုယျလညျး ပွုံးပွီး ပွနျဖွလေိုကျတယျ။ ” မယူပါဘူး ” လို့..။ ( နို့ ယူမယျပွောလညျး ရမှာမှ မဟုတျတာခညျြးကိုး )
ပွောခငျြတာက အဲ့ဒါမဟုတျဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ပိုကျဆံတှမွေငျတော့ ” ငါလညျး ထီလေးဘာလေး ထိုးဦးမှပါ” လို့ သူဌေးလုပျသူကို ခပျမြှဉျးမြှဉျးလေး ပွောလိုကျတယျ။ ထီပေါကျရငျ ဘာလုပျမှာလဲတဲ့။
ထီပေါကျရငျ ကိုယျအရငျဆုံး လုပျဖွဈမှာတှေ ရှိပမေယျ့၊ မပွောတော့ဘဲ တကယျလုပျခငျြတဲ့ ဆန်ဒရှိပမေယျ့ ဒီတသကျမှာ သိပျမဖွဈနိုငျတော့တဲ့ ခဉျြခွငျးတဈခုကို သူ့ကို ပွောမိလိုကျတယျ။ ” တတျနိုငျရငျပေါ့ဟာ ဆငျပေါကျစလေးတဈကောငျလောကျ မှေးခငျြတယျ” လို့၊ ” ဆငျပေါကျစလေးက တအားခဈြဖို့ ကောငျးတယျ” လို့။ ဒီမှာတငျပဲ သူက ကိုယျ့ကို ဘေးတိုကျအနအေထားကနေ တခကျြငဲ့စောငျးကွညျ့ရငျး ခပျတညျတညျ ဆိုတယျ။ ” နငျအခု အရှယျရောကျမှ မှေးလို့ ဘယျဖွဈမလဲ “တဲ့။ ” ဟယျ ဘာလို့လဲ၊ ဆငျပေါကျက စြေးကွီးလှနျးလို့လား၊ စြေးကွီးတယျဆိုတာလညျး ငါသိပါတယျ၊ ဆငျကွီးလာရငျ ထားရပွုရဖို့အတှကျ နရောကောငျးကောငျး လိုအပျတယျဆိုတာလညျး ငါသိပါတယျ၊ အကယျ၍ အဲ့ဒါတှေ အားလုံးငါ့မှာ ရှိရငျလို့ ပွောတာပါ” လို့ မေးလညျးမေး အထှနျ့လညျး တကျလိုကျတယျ။ သူက ခေါငျးခါရငျး ” မဟုတျဘူး။ အဲ့လောကျနဲ့ နငျမှေးလို့ မရဘူး” တဲ့။ တျောတျောရဈတဲ့ ဂပြနျပဲ..
” ပွညျ့စုံနပွေီပဲရော၊ ဘာလို့ မှေးလို့ မရ ရမှာလဲ ” လို့ အတိုကျအခံ ဆနျဆနျလေး ပွောလိုကျမိတယျဆိုရငျပဲ၊ သူက ပိုကျဆံလညျး ရပွေီးသှားပွီမို့ ကိုယျ့ကို နညျးနညျးပါးပါးစကားပွောဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပုံရတယျ။”
” ဒီလိုရှိတယျဟ၊ ဆငျရဲ့သကျတမျးက လူ့သကျတမျးနီးပါးရှိတယျလေ။ နငျက အခု အသကျ(၄၀)ပဲထားပါတော့၊ အခုမှ ဆငျပေါကျလေးမှေးမယျဆိုရငျ နငျသသှေားရငျ သူက အရှယျကောငျးပဲ ရှိဦးမှာလေ၊ နငျမရှိတော့ရငျ သူ့ကို ဘယျသူက ကြှေးမှေးပွုစုစောငျ့ရှောကျမတုနျး ” တဲ့။
ကွညျ့စမျး! ဘယျလောကျတောငျ တုံးအပွီးရယျစရာကောငျးလိုကျတဲ့ မေးခှနျးလဲလို့။ ကမြလညျး တကိုယျတညျး အဲ့လိုတှေးပွီး ပှဲကကြ ရယျပဈလိုကျတယျ။ အားရပါးရ ရယျပွီးမှ အခုလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရယျပွောပွောမိလိုကျတယျ။ ” သူဌေးနှယျ ” အ ” ရနျကော… အရှယျကောငျး ဆငျတကောငျကို လိုခငျြသူတှမြေား ပေါလှနျးလို့၊ ရောငျးစားမလား၊ ပွစားမလား၊ ငှားမစား၊ ခိုငျးစားမလား ဒီလောကျအသုံးဝငျတဲ့ တရိစ်ဆာနျအတှကျ နစေရာ စားစရာ ဒီလောကျတော့ လူတိုငျးစဉျးစားတတျပါတယျ သူဌေးရယျ၊ ငါသသှေားလညျး သူ့အတှကျ ပူစရာမလိုပါဘူး ” လို့ ခပျအေးအေး လသေံနဲ့ ပွောလိုကျမိတယျ။
ဟုတျတယျမလားဟငျ! ကမြ တှေးတာ စဉျးစားတာ မလှဲဘူး မလား။ ဒါပမေယျ့ ဒါပမေယျ့ပေါ့၊ ” နငျတျောတျော ရကျစကျတာပဲ ” ဗွုနျးခနဲ ကွားလိုကျရတဲ့ စှပျစှဲသံကွောငျ့ ကမြရဲ့ လှုပျရှားမှုတှေ ရုတျတရကျ ငွိမျကသြှားရတယျ။ ” ဟငျ! ဘာလို့လဲ ” ” ဘာလို့လဲ ဟငျ! ”
” ဘာလို့ရမလဲ…နငျစောစောက ပွောတဲ့ နငျ့ဆငျရောကျသှားနိုငျတဲ့ နရောနဲ့အနအေထားတှေ စဉျးစားကွညျ့စိမျး၊ ဘယျတခုမြား သူ့အတှကျ သကျသာတဲ့ အနအေထားရှိလဲလို့၊ နငျက နငျသသှေားတာနဲ့ သူ့ကို ဘယျရောကျရောကျ၊ ဘယျသူ့လကျထဲ ဘယျလို အခိုငျးခံရခံရ၊ သံကွိုးတှနေဲ့ ခညျြနှောငျပွီး တရိစ်ဆာနျရုံလိုနရောမြိုးမှာ တသကျလုံး အကဉျြးခခြံရခံရ၊ အစှယျပဲ အဖွတျခံရခံရ၊ ဘာဖွဈဖွဈ နငျနဲ့ မဆိုငျတော့ဘူးလို့ နငျယူဆထားပုံရတယျနျော” တဲ့။
” နငျတျောတျော ရကျစကျတာပဲ ” ဘုရားရေ ထပျပွောပွနျပွီ ဒီစကားကွီး။
” တကယျဆို နငျ့မှာ အသကျမရှိတော့ပမေယျ့ ၊ နငျ့မှာ တာဝနျရှိသေးတယျ။ အို… ငါတောငျ သရေသေးတာပဲ၊ ဘယျတတျနိုငျမလဲဆိုတဲ့ လူ့တာဝနျမကတြေဲ့ စကားမြိုးတော့ ပွောလို့တော့ရတာပေါ့လေ။
ဒါပမေယျ့ နငျ့ကို ဘယျသူက အတငျးရိုကျ မှေးခိုငျးလို့လဲ၊ နငျ့ဖာသာနငျ အစကတညျးက သူ့ကို တာဝနျယူပွီး မှေးထားတာလေ၊ နငျမှေးခငျြလို့၊ နငျခဈြလှနျးအားကွီးလို့၊ ခဈြစရာလေး ခဈြစရာလေး ဆိုပွီး မှေးတာ မဟုတျဘူးလား၊
” နငျ အသကျရှငျနစေဉျတုနျးကတော့ သူနဲ့ပါတျသကျပွီး စိတျခမျြးမွမှေု့၊ ကွညျနူးမှု၊ လူအထငျကွီးမှု စတာတှေ နငျသူ့ဆီက ယူတယျ၊ သူက နငျ့အတှကျ ကနြေပျစရာဖွဈစခေဲ့တယျ မဟုတျလား၊ သူ့အတှကျလညျး သူ့ကို ခဈြတဲ့ ( တကယျတော့ နငျ့စိတျမြိုးနဲ့ဆို သူ့ကို ခဈြခငျြယောငျဆောငျတာပေါ့) သခငျလညျး မရှိတော့ရော ဒုက်ခတှေ ရောကျရတော့မှာ သိသိကွီးနဲ့၊ နငျမသခေငျကတညျးက နငျတခုခု မစီစဉျပေးခဲ့ဘူးဆို နငျတျောတျော မတရားတာပဲ၊ နငျ့လောကျ ရကျစကျတဲ့သူရှိပါဦးမလား။ နငျ့လောကျ တာဝနျမဲ့တဲ့သူ ရှိပါဦးမလား ” တဲ့။
သူပွောလိုကျတော့မှ ကမြ တုနျလှုပျသှားမိတယျ။ တဆကျတညျးမှာ တခြို့ကို သတိရသှားတယျ၊ လူတခြို့ဟာ ကိုယျ့အိမျမှာ မှေးမွူထားတဲ့ တရိစ်ဆာနျတကောငျအပျေါကိုတောငျမှ လူစိတျမှေးပွီး အစအဆုံး တာဝနျယူ စဉျးစားပေးတတျကွပမေယျ့၊ လူတခြို့ကတော့ ကိုယျ့သှေးကိုယျ့သားကိုယျ့သားသမီးအပျေါမှာတောငျ၊ အဲ့သညျ့လို တာဝနျယူစဉျးစားမပေးကွဘူး။ ငါသရေငျ နောကျလူတှဘောဖွဈကနျြခဲ့ကနျြခဲ့။ တာဝနျမရှိတဲ့အတိုငျးပဲ။
လူတခြို့က တိရိစ်ဆာနျတကောငျဆီက မပွောပလောကျတဲ့ ကွညျနူးမှု၊ သာယာမှု၊ အဖျေါပွုမှုလေးကို ရတာနဲ့တငျ တိရိစ်ဆာနျကို ကြေးဇူးတငျတငျ ခဈြခငျတှယျတာ တတျကွပမေယျ့၊ လူတခြို့ကတော့ လိုတဲ့အခါသုံး၊ မလိုတဲ့အခါ လူအခငျြးခငျြး ခဈြခငျတှယျတာခွငျး ကြေးဇူးကငျးစှာ ဟငျးရှကျကနျစှနျးပမာ စှနျ့ပဈတတျကွတယျ။ လကျလှတျစပယျ လုပျတတျကွတယျ။
” နငျဟာ အလုပျမှာ တာဝနျကတြေဲ့ ဝနျထမျးကောငျးဆိုတာ ငါသိပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ အလုပျခှငျမှာ တာဝနျကရြေငျ ဝနျထမျးကောငျးပဲဖွဈမယျ၊ လူပီသတဲ့ လူဖွဈဖို့ကတော့ လူ့လောကရဲ့ ကဏ်ဍအသီးသီးမှာ လူ့ကငျြ့ဝတျ လူ့ဝတ်တရားတှကေို တာဝနျကဖြေို့လိုတယျ” တဲ့။